David Plummer, onye bụbu injinia Microsoft tụnyere Linux na Windows | Site na Linux
David Plummer, onye bụbu injinia Microsoft jiri Linux tụnyere Windows
Ọtụtụ afọ enwere esemokwu n'etiti Windows na Linux nke rue taa ruoro obodo okike.
Ma ọ bụ na karịrị arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ na oge ọ bụla na-akpalite esemokwu a, David Plummer, onye injinia lara ezumike nká onye rụrụ ọrụ na mmepe Windows, nyere echiche ya, echiche m na-agbalị ịbụ onye kachasị ele mmadụ anya n'ihu.
David Plummer arụ ọrụ na Windows kemgbe ụbọchị nke MS-DOS na Windows 95. Ọ bụ onye edemede nke ọtụtụ rụzuru dịka Windows Task Manager, Zip File Support for Windows, n'etiti ndị ọzọ, nwere ikikere isii n'ọhịa nke injinia ngwanrọ.
Otú ọ dị, nke bụ eziokwu Na ya rụrụ ọrụ maka Microsoft akwụsịghị ya ịkwado mmepe Linux, dịka ọ na-akọwa dịka ọmụmaatụ, na na mmalite 90, ọ doziri ụfọdụ nsogbu na koodu isi Linux tupu iziga ha na Linus Torvalds.
Onye ahụ lara ezumike nká engineer tIji mee ka a tụnyere n'etiti Windows na Linux na-enyocha usoro sistemụ abụọ sitere n'akụkụ dị iche iche: ojiji, mmelite na nche.
Ọ bụ nkwupụta siri ike David Plummer, na-arụ ụka na Linux Kwuru nke ọma "Enwereghị onye ọrụ kwesịrị ekwesị gafere usoro iwu '.
Usoro iwu a nwere ike ịdị oke ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye nkwado nke Bash ma ọ bụ Zsh, n'etiti ndị ọzọ, mana ị nweghị ike ịkọwa ya dịka ọ dị mfe iji, "ka ọ na-ekwu.
Ọ naghị achịkwa eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ nkesa Linux taa na-eji interface desktọọpụ desktọọpụ maka ndị chọrọ ya.
Ọ gbakwụnyere, "mana dị ka onye na-emepụta shea, ọ bụrụ na m ga-enwe nkwuwa okwu, ha na-adịkarị ezigbo egwu." Tupu ikwu na Mint nkesa bụ isịneke na a kama mma interface.
“Windows, n’aka nke ọzọ, na-agụnye ndabara desktọọpụ shei interface na, ọ bụrụ na ị na-ahapụ kpam kpam nkeonwe imewe aesthetics, na-ọkachamara haziri, anwale usability ụkpụrụ, na-ewe dị iche iche nke imewe n’ime akaụntụ. Ndị mmadụ nwere ikike dị iche iche chọrọ ịnweta. N'ihe banyere iji rụọ ọrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na etinye na nnweta na metric ahụ, Windows pụtara ìhè, "ka o kwuru.
Na mmelite, David Plummer toro eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ nke Windows na-elekọta nke ọma site na otu Windows Update team raara onwe ya nye na Microsoft.
Otú ọ dị, Ọ na-akwa ụta na usoro ahụ na-agbagwoju anya mgbe ụfọdụ, n'adịghị ka Linux:
"Ọ dị mfe iji melite sistemụ Linux, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enweghị ndị otu ọkachamara ịzaghachi maka mmekpa ahụ ụbọchị efu, mmelite ahụ na-apụta ngwa ngwa ngwa ngwa na ụfọdụ, ị nwedịrị ike imelite kernel na-ebuteghị," .
N'ezie, ụfọdụ akụkụ nke kernel Linux ga-achọ ịmegharị n'oge mmelite, dịka ụfọdụ akụkụ nke sistemụ Windows. Otú ọ dị, onye bụbu engineer nke Microsoft kwenyere na Windows chọrọ ka sistemụ malitegharịa kwa mgbe.
N'ịga n'isiokwu nke mmelite, ọ chetara na ha n'ozuzu ha na ụwa emeghe, belụsọ ma ị na-eji nkesa akọwapụtara site n'aka ndị na-ere ahịa.
Plummer kwenyere na ngwanrọ na-emeghe emeghe ka emeghe nche, naanị n'ihi na, ihe ndị ọzọ hà nhata, ọ dị mfe ịchọta akụrụngwa na ngwanrọ mepere emepe iji mebie.
"Echere m na ọ bụ obere mmejọ ịtụkwasị [iwu Linus] obi," ka o kwubiri. Otú ọ dị, ọ kwenyere na Linux dị nchebe karị. O kwenyere na Windows bụ ihe a ma ama na ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ karị maka ndị na-eme ihe ike. Ọzọkwa, imirikiti ndị ọrụ Windows na-ejigide ikike onye nchịkwa niile.
David plummer tinyekwara Windows na Linux na njirisi ndị ọzọ dị ka ịhazi ihe, akwụkwọ na obodo. Mgbe ọ bịara na nhazi, dịka ị nwere ike ịkọ, na-eche Linux bụ ihe customizable, Ebe ọ bụ na sistemụ arụmọrụ bụ oghe oghe.
Ọ dị mfe itinye atụmatụ ọhụrụ ma e wezụga na o zuru ezu iji gwa Abigel ole na ole. Ọ bụrụ na Linus Torvalds na ndị isi ọrụ ahụ chere na achọrọ ọrụ a chọrọ, ọ ga-agwakọta ya. Ma ọ bụghị ya, ọ ka nwere ike ịme alaka ma tinye ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ajụrụ ya.
Nke a bụkwa ihe na-eme n'obodo, dịka ọmụmaatụ Debian agbagharala n'ihi sytemd wee kwe ka Devuan pụta, ebe na Windows, ịtinye ma ọ bụ wepu ọrụ siri ike karị.
Banyere akwụkwọ, onye bụbu engineer nke Microsoft kwenyere na enweghi otutu akwukwo kariri koodu isi na Linux dịkwa maka ọha na eze. Nke bụ ego. Agbanyeghị, iji MSDN, Microsoft na-enye ezigbo ezigbo akwụkwọ.
N'ikpeazụ, obodo ahụ ọzọ David Plummer kwenyere na Microsoft na-eme mgbanwe, dabere na nyocha nke nnọkọ IT a ma ama, dị ka obodo Microsoft buru ibu ma na-azaghachi: ọtụtụ echiche, azịza na azịza ndị ọzọ gbasara ajụjụ metụtara Windows karịa Linux metụtara ajụjụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » David Plummer, onye bụbu injinia Microsoft jiri Linux tụnyere Windows